Mogadishu Journal » 2018 » April » 16
Puntland oo Baaq u Dirtay Imaaradka Carabta
Mjournal :-Madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo goor dhow Shir ku qabtay Xeradda Ciidamada badda Puntland ee ku taalla duleedka Magaalada Boosaaso ayaa ka hadlay Wararka sheegaya in dowladda Imaaraadka Carabta ay ka baxday degaanda Puntland. Waxaa uu...
Imaaraadka oo agabkoodii ka qaatay dugsiga tababar Jen Gordon
Mjournal :-Imaaraadka Carabta ayaa maanta inta badan agabkiisa iyo qalab milateri ka rartay xerada Tababar ee ay ku lahaayeen degmada Hodan ee magaalada Muqdisho. Gawaari Konteenaro ah oo lagu daabulayay agabyo iyo saanad milateri ayaa la arkayay, kuwaasoo ka soo baxayay Xerada...
Mjournal :-Wararka inaga soo gaaraya degaanka Ceelgaras ee Gobolka bakool ayaa waxaa ay sheegayaan halkaasi uu ka dhacay dagaal u dhaxeeyay Ciidanka Dowladda iyo ururka Al-shabaab. Dagaalka ayaa yimid kadib markii rag ka tirsan ciidamada ay weerareen Saldhig ay ku sugnaayeen...
Mjournal :-Wasiirka Wasaarada Maaliyada xukumada fedraalka Soomaaliya C/raxmaan Ducaale Bayle oo ku sugan dalka Mareykanka ayaa khudbad ka jeediyay Jaamacadda Caalamiga ah ee Harvod, taas oo uu kaga hadlay fursadaha Maalgashi ee Soomaaliya ka bannaan. Wasir Bayle ay...
Mjournal :-Madaxweynaha Jamhuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka qeyb galay shir-madaxeedka dalalka xubnaha ka ah Jaamacadda Carabta oo ka dhacay magaalada Al-Dahraan ee Boqortooyada Sucuudiga ayaa saaka dalka dib ugu soo laabtay. Madaxweynaha...
War laga soo saaray shirkii Jaamacada Carabta ee ku soo dhamaaday Dammaam
Mjournal :-Shir madaxeedka 29aad ee Jaamacadda Carabta ayaa lagu soo gaba gabeeyay magaalada Damaam ee Boqortooyada Sacuudi Carabiya, iyadoo laga soo saaray war murtiyeed ka kooban dhowr qodob. Madaxda Jaamacadda Carabta ayaa khudbadahooda diiradda ku saaray xaalada ka jirta...
Mareykanka oo digniin u diray xukuumadda Syria
Mjournal :-Nikki Haley, Safiirka Mareykanka u fadhiya Qaramada Midoobay ayaa digniin u dirtay Madaxweynaha Syria Bashar al-Assad Axaddi shalay, iyadoo sheegtay in Mareykanka uu gantaalo cusub ku weerari doono taliskiisa, hadii uu mar kale fuliyo weerar uu u adeegsado hubka...
Mjournal :-Madaxda wadamada ku bahoobay ururka Jaamacadda Carabta mara laga reebo Lix Madaxweyne oo uu ku jiro Amiirka Qadar ayaa xalay kulankii 29-aad ururka ugu soo gaba gaboobay dalka Sacuudiga. Dhammaadkii shirkan ayaa waxaa laga soo saaray War-murtiyeed lagu soo hadal qaaday...
Mjournal :-Imaaraadka Carabta ayaa go’aan ku gaaray inay joojiyaan howlgakii tababarka ee dhismaha Ciidamada Soomaaliya, iyagoo kaga jawaabaya dhacdadii 8-dii bishan lagu xayiray diyaarad ay leeyihiin oo lagu xanibay Garoonka diyaaradaha Muqdisho, lagana wareegay lacag mallaayiin...